Track 5: You Don't Know — UHAMBO LEE - OFFICIAL SITE
Indlela got me phezulu ukuze angiboni mina ehla
Uma you yodwa azi lokho Ngabhekana, kodwa mina namanje emi manje
Futhi niyazi mina Awunandaba akukho inzondo
Lezi amafu ebusweni bami
Ngithola ephakeme, ephakeme, ephakeme
Awazi yini akwenza kimi
Endiza okusezingeni futhi ngizizwa khulula
Got ngizizwe like Cleveland, lapho ethi Lebron emuva
I wanna nokujikijela yamathanga ne streamers nakho konke, Ngizizwa okuhle
Futhi uma ufunda ukuthi i-King James
Ungakwazi ngithi feeleth okuhle, akakhohlwa iziqubu imvula
Bayakhohlwa isiphepho amafu phezu kwekhanda lami
Bruh angikuva emhlabathini, akukho amahange imilenze yami
Ngithathe ukukhukhuleka off namuhla ngaphandle akukho embhedeni
Izinyawo ulenga like ezinye dreads, kodwa awalisonti lokho Ngathi
Lapho ngithi Ngithathe ezintantayo okusezingeni kunanini
Angiqondile ukuthi Denver Kwakuwuhambo lwamakhilomitha buzz okusezingeni, Ngingeze ngenza kangcono
I do not sasendle siphuma kuzo elikhulu ebusuku amaqembu, Ngathola phakade
With oPhezukonke ngifika jackpots ngaphandle akukho isigwedlo
Ake ngicacise lokhu, owukuphela kukaNkulunkulu Ngiyamesaba
Uhlala endaweni ephakeme nasendaweni engcwele futhi Bro Wathola kimi lapha
Umphefumulo wami safike uthenge futhi isono sami safike iqale
Ngeke kube akubuyiselwa, silungiselele lift off
Brandon • December 9, 2014 at 5:24 am • Phendula
Le ngoma… Sengathi uNkulunkulu anganibusisa kakhulu uhambo. Futhi uzothola kahle ngokushesha uma iNkosi ithi okufanayo.
Jimmy • January 21, 2016 at 3:00 pm • Phendula
Ngayacabanga kuphela – wenza ingxenye mayelana “Obama Biden” kusho ukuthi uvotele bani kanye / noma ukusekela likaMengameli Obama? NjengomKristu, Ngingathanda ukusekela i umongameli Abansundu eMelika – kodwa akuyona kucace ukuthi u-Obama isekela ezinye zezinto zokungamhloniphi uNkulunkulu? Ngiyacabanga ukuthi umatasa kakhulu, kodwa ngiyabonga kusengaphambili, ukuthi.